Kenya Safari Holiday, Safaris kuKenya, Kenya Budget Safaris, Kenya Safari, Budget Holiday Safaris
Kenya Tours, Kenya Safari, Kenya Safaris, rwendo rwendo kuTanzania
Mount Kenya Kukwira Safaris
Mt Kilimanjaro Kukwira Safaris
Zvakanakisa zvebhajeti kumisasa & yakasarudzika pekugara kushanya mukati Kenya .
WELCOME TO BUDGET HOLIDAY SAFARIS
Famba nenyanzvi dzinoziva Africa.
Budget Holiday Safaris inoshanya inoshandira muKenya neTanzania, ichipa rondedzero yehuwandu hwakakwana hwekufamba kwekufambisa masevhisi kune vanhu uye mapoka munyika mbiri dzakateerana. Budget Holiday Safaris inoshandirwa nevanyanzvi vane hunyanzvi, vane ruzivo rweanopfuura makore gumi muindasitiri yekushanya. Iyo kambani inoshanda nevatakasiyana vanobatana navo muIyekufambisa uye Kugamuchira Vaenzi muKenya neTanzania kupa rubatsiro rwakanyanya kune vatengi. Tine masevhisi akasiyana siyana anokwanisa kugadzirwa kuti akwane zvaunoda uye vashandi vedu vane hunyanzvi vanoshanda pamwechete kuti vape mabasa akanaka kune edu akasiyana siyana mutengi. Inowanikwa muNairobi City Center, mahofisi edu anovhurika mazuva ese kubva 7:00 AM, mazuva 7 pasvondo, achipa mabasa ekutsigira uye zvekukumbira kwekukurumidzira, 24/7
3 IZUVA KENYA TORA: MASAI MARA PACKAGE
Kunzvimbo yekutanga yekuenda kuKenya, iyo Masai Mara mutambo wekuchengetedza, inzvimbo inozivikanwa yepasirese mutambo nekuda kwekushanduka kwemwaka wegore, inozivikanwa seiyo Great Migration, iyo inoshamiswa sechishamiso chechisere chenyika.
Mazuva mashanu Masikati MT KENYA CLIMB- SIRIMON-SIRIMON ROUTE
Kwira mudondo mudondo mugwenga rakakura kusvika kune yakasangana nharaunda. Nzira inotangira kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwegomo pedyo neNanyuki. Kupinda kwakakwanira uye dzimba dzekumusoro ndidzo dzakanakisa pane ino chikamu chegomo.
6 WEDU KENYA SAFARI: MASAI MARA - LAKE NAKURU - AMBOSELI
Lake Nakuru yagara ichionekwa seyakanakisa gungwa re param. Musiyano uye unooneka wekuparadzaniswa pakati pegungwa rehuswa seshiri neshiri dzayo dzinotyisa uye nehuni dzinovezwa.
6 ZUVA MOUNT KILIMANJARO TREKKING: MACHAME ROUTE
Iyi ndiyo pamwe yakanyanya kunaka nzira yeKimimanjaro. Midziyo yako yese uye zvekushandisa zvinogadzirwa uye mubiki anogadzirira zvese zvikafu zvako, Pane pekugara munzira yeMarangu mune matumba.
8 IZUVA BUDGET HOLIDAY SAFARI - MASAI MARA
3 husiku paMasai Mara Game Reserve- Kenya, kwaunosvika kuwana zvinopfuura mutambo mumwe chete mutambo. 1 husiku muLake Nakuru umo iwe unowana kuona Flamesos, chena uye nhema nhinhi uye nezvimwe zvakawanda.
10 IZUVA KENYA NA TANZANIA BUDGET SAFARI: MASAI MARA
Mazuva gumi Kenya neTanzania mhuka dzemusango rwendo ndeye musasa wekufamba uyo unokupa iwe chaiye chimiro chemo safari. Isu tinofukidza Masai Mara, Nyanza Nakuru, Serengeti, Ngorongoro Crater neLake Manyara.
BUDGET SAFARI TORA PAKATI
Budget Holiday Safaris zvigadzirwa zvinosanganisira kuunganidzwa kwakazara kwe safaris mu Kenya uye Tanzania uye Uganda. Lodge Safaris Anoshamisira uye mwero mwero Budget Camping Safaris, Anosvibisa Anogara Tent Camp Camp Safaris, Gomo Kenya Kukwira, Kufamba Safaris kwakasarudzika kuenda kunzvimbo dzisina kunyanyo shandiswa nzvimbo, tsika nemadzinza kushanya pamwe nemahombekombe zororo.
Zvese zviri zviviri kubvapo uye Tailor yakaitwa safaris zvine kukwikwidzana mutengo uye zvakanyatsogadzirirwa kuti ikwane yako bhajeti. Budget Holiday Safaris inopa yakazvimiririra airport kuendeswa pakati peKirimanjaro airport uye Arusha. Tine pasi pevhu zvakare, izvo zvinosanganisira kuchengetera mahotera uye kuendesa ndege kumahotera muguta uye mahotera kunze kweguta.
Budget Holiday Safaris inoshanya inoshandira muKenya neTanzania, ichipa rondedzero yehuwandu hwakakwana hwekufamba kwekufambisa masevhisi kune vanhu uye mapoka munyika mbiri dzakateerana.
Mahotera uye Safari Lodges
Basa redu revatengi uye kushanya
chinongedzo vagadzirira kubatsira.
St.Ellis Imba, Wabera Street
© 2019. Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Budget Holiday Safaris
Dhizaini Webhu na Wnevolutiondesign.com